Momba anay - Ismart Goods Technology Co., Ltd.
2006 Mpanamboatra ho an'ny fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena fitaovana napetraka
2007 milina fanatanjahan-tena amin'ny taranja baolina kitra an-tsokosoko voalohany sy milina fanenomana talenta namboarina amidy
2008 fotoana voalohany naseho tao amin'ny China Sports Show
Ny taona 2009 niditra soa aman-tsara tao amin'ny tsena Netherlands
2010 nohamarinin'ny CE / BV / SGS; niditra tao amin'ny tsenan'i Austria sy Russia
2011-2014 niditra tanteraka tamin'ny tsena iraisam-pirenena ary nanao sonia masoivoho 14 any ivelany; Milina manan-tsaina taranaka faha-2 natomboka tamim-pahombiazana
2015 ny tsena iraisam-pirenena nanitatra sy ny milina fandinihana baolina kitra faha-3 natomboka
2016 Nalefa tamin'ny fomba lehibe ny rafitra fiofanana momba ny baolina kitra 4.0
2017 Football system 4.0 nahazo loka volamena tamin'ny International Industrial Design Design
2018 Nosoniavina amin'ny Association Badminton China ho an'ny milina fanofanana badminton, Mizuno ho an'ny milina fanofanana tenisy; Nampiroborobo Grandly ny kilalao fanatanjahan-tena manan-tsaina voalohany
2019 nosoniavina tamin'ny Fikambanan'ny Tenisy China ho an'ny milina baolina tenisy, fikambanan'ny basikety Guangdong ary Yijianlian Camp ho an'ny milina fitifirana baskety
2020 nomen'ny "Enterprise teknolojia vaovao"
2021 Sampana orinasa maromaro natsangana ho fampandrosoana haingana amin'ny sehatry ny fahasalamana ho fanampiana ny olona manerantany ,,,,
Ny vokatra ara-panatanjahantena manan-tsaina toy ny milina filalaovana basikety, milina fitifirana Badminton, milina fitifirana tenisy, milina fampiofanana baolina kitra, milina filalaovana baolina kitra, milina fanofanana volley, milina tenisy ambony latabatra, milina fanamoriana milina fanenomana, fitaovana fampiofanana tenisy, rakotra tenisy, badminton raketa sns.
Afa-tsy ny tsena anatiny, nanangana rafitra fivarotana tsy miankina sy serivisy fanodinam-bola amin'ny tsena manerantany ihany koa izahay. Miaraka amin'ny foto-kevitry ny fisokafana, ny fandeferana ary ny fiaraha-miasa mandresy fandresena, ny orinasanay dia nampiroborobo tsy tapaka ny fizotran'ny fanatontoloana ary aseho manerantany miaraka amin'ny fanintelon'ny China Smart Manufacturing.
CE, BV, SGS sns
• Fanamarinana ny mpanome tombana
• Fanamarinana CE Security Union CE
• Fanamarinana SGS amin'ny ankapobeny
• Fanamarinana ny patantim-pirenena
• Fikambanan'ny mpikaroka momba ny fiofanana ho an'ny baolina kitra eran-tany
• Bureau Veritas (fanamarinana kalitao iraisam-pirenena)
Ny antoka: Fiantohana 2 taona ho an'ny ankamaroan'ny milina fanofanana baolina anay
Ny MOQ: Ny MOQ dia ao anaty singa 1, tongasoa izahay hividy na hanao raharaha miaraka aminay